स्वास्थ्य-जीवनशैली Archives - Mitho Khabar
October 27, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on अब श्वास परीक्षण गरेर एक मिनेटमै कोरोना पत्ता लाग्ने (भिडियाे)
अब श्वास परीक्षण गरेर एक मिनेटमै कोरोना पत्ता लाग्ने (भिडियाे) सिंगापुर । अब काेराेना (कोभिड–१९) संक्रमण एक मिनेटमै पत्ता लाग्ने भएको छ । सिंगापुरको ब्रेथोनिक्स कम्पनी मार्फत् दुई विद्यार्थीले ६० सेकेन्डको श्वास परीक्षण गरी कोभिड–१९ पत्ता लगाउने उपकरणको विकास गरेका हुन् । उपकरणको विकास नेशनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुर (एनयूएस)का दुई विद्यार्थी डा. जिया युनान र दु फाङले […]
October 27, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on कोरोना भाईरससँग लड्न कस्तो खानेकुरा उपयोगी ?
कोरोना भाईरससँग लड्न कस्तो खानेकुरा उपयोगी ? कोरोना भाइरस विरुद्ध हाल सम्म कुनै खास औषधि र खोप उपलब्ध छैन । त्यसैले अब यो कसरी नियन्त्रणमा आउनेछ भन्ने कुरा रहस्यकै गर्भमा छ । यद्यपि जसको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो छ उसलाई यो रोगले उति धेरै ग्रसित बनाउन सक्दैन । मृत्युको जोखिम पनि रहँदैन । यसको ठीक विपरित […]
October 25, 2020 mithokhabarLeaveaComment on श्रीमतीबाट १० वर्ष बलात्कृत युक्रेनी पुरुषको यस्तो छ कथा
काठमाडौँ, ७ जेठ । घरेलु हिंसाका अधिकांश घटनामा महिलाहरू पीडित हुन्छन् । एकतिहाइ महिला र युवतीले आफ्नो जीवनमा शारीरिक र यौनिक हिंसा बेहोर्ने गरेको राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कले देखाएको छ । पति वा परिवारका पुरुष सदस्यहरू कमै मात्रामा पीडित हुन्छन् । कैयौँ समाजमा पुरुषविरुद्ध घरेलु हिंसाको खासै चर्चा गरिँदैन र पीडितले एक्लै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । युक्रेनका एक […]
October 25, 2020 mithokhabarLeaveaComment on अचम्म लाग्दो तरीकाले निको हुन्छ तपाईंको दाद (यो विधि अपनाउनुहोस्)
छालाको सुन्दरताले मानिसलाई आकर्षक बनाउँछ र हरेक मानिस सुन्दर बन्न चाहान्छ । विशेष गरि अनुहार, घाँटी, हात, खुट्टाको छाला बाहिर देखिने हुँदा त्यो मानिसको व्यक्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले मानिसहरु छालाको सुन्दरतालाई लिएर संवेदनशील हुन्छन्। तर, छालामा विभिन्न समस्या देखिइने गर्छन्, जसले गर्दा मानिसमा तनाव उत्पन्न हुन्छ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ** दादले छालालाई नराम्रो […]
कोरोनालाइ लिएर अब डराउन पर्दैन प्रमाणित भयो,यस्ता खाने कुराले कोरोनालाइ गराउँछ निष्क्रिय ! एकचोटी अवश्य पढ्नुहोला ;
October 25, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on कोरोनालाइ लिएर अब डराउन पर्दैन प्रमाणित भयो,यस्ता खाने कुराले कोरोनालाइ गराउँछ निष्क्रिय ! एकचोटी अवश्य पढ्नुहोला ;
कोरोनालाइ लिएर अब डराउन पर्दैन प्रमाणित भयो,यस्ता खाने कुराले कोरोनालाइ गराउँछ निष्क्रिय ! एकचोटी अवश्य पढ्नुहोला ; कोभिड संक्रमणबाट जोगिन दैनिक गतिविधिमा सुधार गर्दै खानपिनमा ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।पछिल्लो समय संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा रोगसँग लड्ने क्षमताको विकास गर्नु नै उत्तम विकल्प भएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।त्यसका लागि दैनिक गतिविधि र खानपिनमा […]
October 25, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on यस्ता १८ लक्षण देखिएमा पक्का हुनुहोस् की तपाईलाई क्यान्सर सुरु भएको छ !
यस्ता १८ लक्षण देखिएमा पक्का हुनुहोस् की तपाईलाई क्यान्सर सुरु भएको छ ! एजेन्सी । क्यान्सर भन्नसाथ हामी ठान्छौ, उपचार नहुने रोग । वा प्रा’णघा’तक । तर, यो त्यसबेला मात्र घा’तक हुन्छ, जब यसको लक्षणलाई बेवास्ता गरिन्छ । र, त्यसले जटिल अवस्थामा प्रवेश गर्छ । क्यान्सरको उपचार संभव छ । यदि सुरुवाती चरणमै त्यसको लक्षण […]
October 24, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on दुधमा तुलसीको पत्ता मिसाएर सेवन गर्नुहोस,अहिलेसम्म निको नभएका दिर्घालु रोगको अचुक समाधान हुनेछ।
दुधमा तुलसीको पत्ता मिसाएर सेवन गर्नुहोस,अहिलेसम्म निको नभएका दिर्घालु रोगको अचुक समाधान हुनेछ। काठमाडौ । तुलसी धार्मीक र वैज्ञानिक रुपमा उत्तिकै लाभप्रद वनस्पती हो । यसको औषधीय गुण चमत्कारिक छ । सबैभन्दा बढी अक्सिजन निस्कासन गर्ने तुलसीलाई हिन्दु धर्ममा अमृत समान मानिन्छ ।त्यसैले यसको महत्व जिवनको सुरु देखि अन्त्य सम्म छ । तर यसको औषधीय […]
October 24, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on ढाड दुख्ने समस्यालगायत धेरै समस्याको एउटै उपाय, कपुर ! यसरी प्रयोग गर्नुहोस
ढाड दुख्ने समस्यालगायत धेरै समस्याको एउटै उपाय, कपुर ! यसरी प्रयोग गर्नुहोस कपुरको प्रयोग हामीहरुले पूजापाठको लागी धेरैले प्रयोग गर्ने गरेका छौँ र यसलाई औषधिको रुपमा सहि तरिकाले प्रयोगमा ल्याउन सकिएमा विभिन्न बिरामीको उपचार सजिलै गर्न सकिन्छ र यदि कसैलाई दम रोगमा यो अचूक औषधि साबित हुनेछ| साथै एक भाग फुराएको हिङमा एक भाग कपुर […]
होसियार !! नङ्गमा यस्ता परिवर्तन देखिए बेवास्ता नगर्नुहोस्, हुनसक्छ यति ड’रलाग्दो रो’गको ख’तरा !
October 24, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on होसियार !! नङ्गमा यस्ता परिवर्तन देखिए बेवास्ता नगर्नुहोस्, हुनसक्छ यति ड’रलाग्दो रो’गको ख’तरा !
होसियार !! नङ्गमा यस्ता परिवर्तन देखिए बेवास्ता नगर्नुहोस्, हुनसक्छ यति ड’रलाग्दो रो’गको ख’तरा ! तपाइको आफ्नो स्वास्थ्य अबस्थाको जानकारी लिन नियमित चेकजाच गरिरहनु भएको होला । नियमित गरिने चेकजाँचले शरीरमा कुनै रो’ग छैन भनेर ढुक्क हुनुभएको पनि हुनसक्छ । तर तपाइको शरीरमा क्यान्सरले घर बनाएको हुन पनि सक्छ । आफ्नो शरीरमा केही फरक, अनौठो तथा […]
सम्झने शक्ति तेजिलो बनाउन आजै अपनाउनुहोस् यी उपाय
October 23, 2020 Suman PandeyLeaveaComment on सम्झने शक्ति तेजिलो बनाउन आजै अपनाउनुहोस् यी उपाय
सम्झने शक्ति तेजिलो बनाउन आजै अपनाउनुहोस् यी उपाय काठमाडौं । स्मरण शक्ति अथवा सम्झने शक्ति हामी सबैलाई आवश्यक पर्छ । परीक्षालाई मात्र ध्यानमा नराख्ने हो भने पनि हाम्रो जिवनमा यसको महत्व धेरै रहेको छ । हामीले विभिन्न इतिहासका घटना पढ्नुपर्छ, त्यसलाई अगाडिसम्म लैजानुपर्छ । हामीले भोगेका वा देखेका कुराहरु हामी सबैसँग साझा गर्छौ । यस्तो […]